မြန်မာနိုင်ငံရဲ့  ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာ အရေးပါတဲ့ NCA တနိုင်ငံလုံးအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူညီချက် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တာ အခုဆိုရင် (၅) နှစ် ရှိသွားပါပြီ။ ဒီ (၅) နှစ်တာ ဖြတ်သန်းမှုအတွင်း အောင်မြင်မှုတွေ ဘယ်လောက်တောင် ရခဲ့သလဲ။ ရှေ့ အနာဂတ်မှာ ဘာတွေမျှော်လင့်နိုင်မလဲ။ စိန်ခေါ်မှုတွေက ဘာတွေရှိနေသလဲဆိုတာကို တိုင်းရင်းသားရေးရာ ကျွမ်းကျင်သူ ဦးမောင်မောင်စိုး ကို ကိုအောင်လွင်ဦးက ဆက်သွယ်မေးမြန်း ဆွေးနွေးထားပါတယ်
မေး ။ ။ မင်္ဂလာပါ။ NCA တနိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူညီချက်က အခုဆိုရင် (၅) နှစ် သက်တမ်း ရှိသွားပါပြီ။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တုန်းက ပထမဦးဆုံး သဘောတူညီချက်ရတဲ့အချိန်မှာ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ (၈) ဖွဲ့ ရှိခဲ့ရက အခုဆိုရင် နောက်ထပ် (၂) ဖွဲ့တိုးပြီး (၁၀) ဖွဲ့ ရှိနေပါပြီ။ ဆိုတော့ သဘောတူညီချက်ရတဲ့ အချိန်ကစလို့ ဒီ (၅) နှစ်တာ ကာလအတွင်း အဓိကအောင်မြင်မှုအနေနဲ့ ပြောပါဆိုရင် ဘာတွေများ ရှိမလဲ။
ဖြေ ။ ။ အဓိကတော့ ပြဿနာတွေ အများကြီးရှိတယ်။ ပြဿနာတွေအများကြီးအထဲက ပထမတစ်ချက်ပြောမယ်ဆိုရင် NCA ထိုးပြီးပြီဆိုတဲ့အထဲမှာက ကျနော်တို့က သဘောတူညီချက် မရဘူး။ NCA ထိုးပြီးတဲ့အထဲက ပထမတစ်ချက်ပြောမယ်ဆိုရင် တပ်နေရာချထားရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ သဘောတူညီချက် မရကြဘူး။ ဥပမာဆို RCSS တပ်အင်အားတစုံတရာရှိတယ်။ လက်မှတ်ထိုးထားတယ့် RCSS, KNU တို့နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ တပ်နေရာချထားရေးမှာ သဘောတူညီချက် မရှိတော့ KNU ဖားပွန်ဧရီယာ၊ KNU တပ်မဟာ (၅) ဧရီယာမှာ တိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်တယ်။ RCSS ဆိုလဲ အဲဒီလိုပဲ သူတို့ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာ တိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်တယ်။ RCSS ဆိုရင်တော့ တိုက်ပွဲတွေ အများဆုံး။ နှစ်ရာကျော်၊ သုံးရာလောက် လက်မှတ်ထိုးပြီးမှ ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဒါကလဲ bilateral လက်မှတ်ထိုး၊ NCA လက်မှတ်ထိုးပြီးနောက်ပိုင်းမှာ တပ်နေရာချထားရေး သဘောတူညီချက်မှာ နားလည်မှု အများကြီးကွဲပြားလာတယ်။ ကွဲပြားတဲ့အချိန်မှာ ဒီပြဿနာကို ကျနော်တို့က မဖြေရှင်းနိုင်ဘူး။ မဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အခါမှာ ၂၀၁၈ နှစ်ကုန်ဆိုရင် KNU ကလဲ NCA သဘောတူညီချက်ပါ JMC တို့က ခေတ္တရပ်နားမယ်ဆိုတဲ့အထိ ဖြစ်လာတယ်။ RCSS ကလဲ တပ်ရပ်နားတယ်ဆိုတာ ဖြစ်လာတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ NCA လုပ်ငန်းစဉ်ပြီး ၂၀၁၈ ကနေ ၂၀၁၉ တစ်နှစ်လုံး ရပ်ဆိုင်းသွားတယ်လို့ ပြောလို့ရတယ်။
NCA လက်မှတ်မထိုးထားတဲ့ အဖွဲ့တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောရရင် ရခိုင်မှာကတော့ တိုက်ပွဲက ၂၀၂၀ အတွင်းမှာ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဖြစ်တယ်။ ၂၀၁၉ တုန်းကလဲ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဖြစ်တယ်။ လုံးဝဖြေရှင်းလို့ရမတဲ့ ပြဿနာ ဖြစ်နေတယ်။ အဲဒါ ရခိုင်ပြဿနာကလဲ သီးခြားပြဿနာတစ်ရပ်အနေနဲ့ မဟုတ်ဘဲနဲ့ မြောက်ပိုင်း နှစ်ဖွဲ့စလုံးရဲ့  ပြဿနာ ဖြစ်နေတာကို ကျနော်တို့ တွေ့ရတယ်။ မြောက်ပိုင်းအဖွဲ့ကလဲ စတုတ္ထအကြိမ် ဖိတ်တဲ့အချိန်မှာလဲ AA ကို ပေးမတက်တာကြောင့် မတက်တာ တွေ့ရတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ပြဿနာကတော့ ဖြေရှင်းစရာတွေက များသေးတယ်လို့ ပြောနိုင်ပါတယ်.
မေး ။ ။ အခု NCA (၅) နှစ်ပြည့်မှာပဲ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်စတဲ့ အဓိကခေါင်းဆောင်တွေလည်း မိန့်ခွန်းတွေပြောတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အစိုးရနဲ့ ထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်တွေရဲ့  မိန့်ခွန်းတွေထဲမှာလဲ NCA (၅) နှစ်တာကာလအတွင်း ကြုံရတဲ့ အခက်အခဲတွေ၊ စိန်ခေါ်မှုတွေကို အသိအမှတ်ပြု၊ လက်ခံပြောသွားတာတွေကို တွေ့ရပါတယ်။ ဥပမာ NCA သဘောတူညီချက်ထဲမှာ အရေးကြီးတဲ့ အမျိုးသားအဆင့်၊ နိုင်ငံရေးအဆင့် ဆွေးနွေးပွဲဆိုတာကို အဖြစ်လောက်ပဲ ထည့်ထားတာတွေက - မကောင်းဘူးဆိုတာမျိုး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မိန့်ခွန်းထဲမှာ ထည့်ပြောပါတယ်။ ဒီလိုကိစ္စတွေက NCA လမ်းကြောင်းမှာ ဘယ်လောက်အထိ အဟန့်အတား ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ ယူဆပါလဲ။
ဖြေ ။ ။ စဉ်းစားမှု ကွဲလွဲမှု ရှိနေတာတွေကို ကျနော့်အမြင်ပြောရရင် အစိုးရနဲ့ တပ်မတော်။ အဓိကတပ်မတော်ဘက်က လက်ရှိဆွေးနွေးပွဲမှာ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေမှာ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေရဲ့  ပြဿနာကို ဖြေရှင်းဖို့ ဇောင်းပေးပြီး စဉ်းစားတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ဘက်က ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေဟာ သူတို့ရဲ့  အမျိုးသားတန်းတူရေး ပြဿနာတွေကို ဇောင်းပေးပြီး စဉ်းစားတယ် ထင်ပါတယ်။ အဲဒီအချက် ဆွေးနွေးမှုနှစ်ခုက စဉ်းစားမှုအခြေခံ မတူညီပါဘူး။ ဒါ့အပြင် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုတွေမှာ မပြေလည်တာကတော့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေအဖို့က ဘာကိုအခြေခံ စဉ်းစားသလဲဆိုတော့ ယနေ့ပြည်ထောင်စုသည် ၁၉၄၇ ခုနှစ် ပင်လုံသဘောတူညီချက် အခြေခံပေါ်မှာ ပေါ်လာတဲ့ ပြည်ထောင်စု ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ အခြေခံမူပေါ် ဖြစ်တဲ့အတွက်ဆိုတဲ့ နိုင်ငံရေးသဘောထားတွေကို ဆွေးနွေးပါတယ်။ အစိုးရနဲ့ တပ်မတော်ဘက်ကတော့ ဒီ ၄၇ ခုနှစ် သဘောတူညီချက်ကို အသိအမှတ်ပြုဖို့ ဝန်လေးပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ၄၇ သဘောတူညီချက်မှာ ခွဲထုတ်လိုက ခွဲထွက်နိုင်ခွင့်နဲ့ (၁၀) နှစ်အတွင်း ခွဲထွက်ခွင့်ပေးမယ်တို့ သဘောတူညီချက်ကို သူတို့ သဘောမတူပါဘူး။ သူတို့အနေနဲ့ကတော့ ဒီနေ့အခြေအနေနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ ပြည်ထောင်စုတစ်ခု တည်ဆောက်ဖို့ဆိုတဲ့ဘက်က စဉ်းစားပါတယ်။ ပထမအချက်မှာ စဉ်းစားမှုက အခြေခံလွဲပါတယ်။ ဒုတိယအချက်အရ ပြောမယ်ဆိုရင် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေဘက်က စဉ်းစားတာက အမျိုးသားတန်းတူရေးနဲ့ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ဆိုတဲ့ အမျိုးသားလက္ခဏာပေါ်ကနေ ဒီပြဿနာကို စဉ်းစားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အစိုးရနဲ့ တပ်မတော်ဘက်က ဖယ်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီလို့ ပြောပေမယ့်လဲ အစိုးရနဲ့ တပ်မတော်ဘက် အခြေခံစဉ်းစားတာက ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှု လျှော့ချပြီးတော့ ပြည်နယ်တွေကို တစတစ အာဏာတိုးပေးလိုက်တာမျိုးကို စဉ်းစားပါတယ်။ အဲဒီတော့ ဒီအခြေခံ စဉ်းစားမှု ကွဲလွဲနေတာကို တဘက်က အပြန်အလှန် သဘောပေါက်ပြီးတော့ ဒီအခြေခံကိုက ပြေလည်နိုင်လိမ့်မယ်။
မေး ။ ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မိန့်ခွန်းထဲမှာ ပြောသွားတဲ့တစ်ချက်ကိုလဲ သတိထားမိပါတယ်။ တာဝန်ရှိတဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေ ကိုယ့်တာဝန်ကို ပြတ်ပြတ်သားသားလုပ်ဖို့၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ ကိုယ်ကျိုးစီးပွားကြည့်ပြီး အချိန်ဆွဲတာမျိုးတွေ မလုပ်ဖို့။ လုပ်တယ်ဆိုရင်လဲ ဒါက ငြိမ်းချမ်းရေးကို ဖျက်ဆီးရာ ရောက်တယ်လို့ သတိပေးသွားပါတယ်။ ဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုတာကို ပြောသွားတာတော့ မရှိပါဘူး။ ဆိုတော့ တိုးတက်မှုရအောင် လုပ်နိုင်ရက်နဲ့ ဒီလို ကိုယ်ကျိုးကြည့်ပြီးတော့ မလုပ်ဘူးလို့ ပြောနိုင်တဲ့ကိစ္စတွေ။ တကယ်ပဲ ရှိနေလို့ အခုလိုပြောသွားတာလား။ ဘယ်လိုယူဆပါသလဲ
ဖြေ ။ ။ ကျနော့်အမြင်ကတော့ ဒါမျိုးက ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာ ဒီလိုပြစ်တင်ဝေဖန်မှုမျိုးက မလုပ်သင့်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကို တကယ်စတာက ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှာ သမ္မတဦးသိန်းစိန်မှာ ပြည်ထောင်စုအစိုးရက ခေါ်တာပါ။ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကို တကယ်တမ်း ခေါ်ဆိုနိုင်သူက အစိုးရပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ -- အစိုးရဖြစ်ဖြစ်၊ NLD အစိုးရပဲဖြစ်ဖြစ် ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းကနေ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ် ဖော်လို့မရဘူး။ အစိုးရကပဲ ဖော်လို့ရမယ်။ ဒီနေ့ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကို ဦးဆောင်နေတာသည် အစိုးရ။ အဲဒီတော့ တကယ်တမ်းက ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ် အောင်မြင်ဖို့အတွက် သွက်သွက်လက်လက် အားပေးဖို့လိုတယ်။ တွန်းတွန်းတိုက်တိုက် လိုတယ်ဆိုရင်လဲ အဓိကတော့ အစိုးရက ဦးဆောင်ပြီးတော့ လုပ်ဖို့လိုအပ်မယ် ထင်ပါတယ်။ ဒါကတော့ ကျနော်က ပြည်ခိုင်ဖြိုး၊ NLD တို့ကို ရည်ညွှန်းပြောတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တရပ်ရဲ့  အဓိကတာဝန်ခံမှုက တည်ဆဲအစိုးရ ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို ပြောချင်တာပါ။
မေး ။ ။ (၅) နှစ်ပြည့် မိန့်ခွန်းတွေ၊ ထုတ်ပြန်ချက်တွေမှာ ပြီးခဲ့တဲ့ကာလအတွင်း အောင်မြင်မှုတွေ၊ စိန်ခေါ်မှုတွေကို သုံးသပ်တာတွေ ရှိပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ကွဲလွဲချက်တွေ ရှိနေတာကိုလဲ သတိထားမိပါတယ်။ ဆိုတော့ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာ တဘက်နဲ့တဘက် ချဉ်းကပ်ပုံ အမြင်တွေမှာ အဓိက ဘာတွေများကွဲလွဲနေလို့ ရှေ့ မတိုးနိုင် ဖြစ်နေရတယ်လို့ ဦးမောင်မောင်စိုး နားလည်ထားသလဲ။
ဖြေ ။ ။ အောက်တိုဘာလ (၁၅) ရက် NCA (၅) နှစ်ပြည့်မှာ Statements (၃) ခု ထွက်ပါတယ်။ တစ်ခုက NLD အစိုးရက ထုတ်တာပါ။ နောက်တစ်ခုက ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က ထုတ်တာပါ။ နောက်တစ်ခုကတော့ EAO တိုိင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေ ထုတ်တာပါ။ အစိုးရရဲ့  ထုတ်ပြန်ချက်မှာ အပိုင်း (၃) ပိုင်း အဓိကပါတယ်။ ပထမပိုင်းကတော့ ၂၀၂၀ နောက်ပိုင်းမှာ NCA လက်မှတ်မထိုးသေးတဲ့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကိုလဲပဲ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲ စားပွဲရောက်အောင် ကြိုးစားသွားမှာ ဖြစ်သလို၊ NCA လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးကို အခိုင်အမာ ဆက်လုပ်သွားမယ်။ ဒုတိယပိုင်းမှာဆိုရင်တော့ -- အစည်းအဝေးပွဲမှာ ပြည်နယ်အခြေခံတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရေးဆွဲရေးကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သွားမယ်။ တတိယမှာ ဒီအကောင်အထည်ဖော်ထားတဲ့ ဥပဒေတွေကို အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးမှာ ဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုပြီး အစိုးရကြေညာချက်မှာ တွေ့ပါတယ်။ တပ်မတော်ဘက်က ကြေညာချက်မှာတော့ အဲဒီလို အသေးစိတ်တွေ မပါဘူး။ တပ်မတော်ကြေညာချက်မှာ ဇောင်းပေးသွားတာကတော့ NCA လမ်းကြောင်းကနေ လျှောက်မယ်ဆိုတဲ့ဟာကို ဇောင်းပေးပြောသွားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒီမှာ ထူးခြားတာတစ်ခုကတော့ NCA ထိုးထားတဲ့ EAO ကြေညာချက်မှာ ထူးခြားတဲ့အချက်တစ်ချက်က ဘာလဲဆိုတော့ (၁) နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲ NCA နဲ့ ပတ်သက်ပြီး နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးလမ်းကြောင်းပေါ်မှာ အားလုံးပါဝင်နိုင်ရေးကို သူတို့ကြိုးစားသွားမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကို ဇောင်းပေးဖော်ပြထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒုတိယတစ်ချက်အနေနဲ့ ပြောမယ်ဆိုရင် ရခိုင်ပြည်နယ်ပြဿနာကို နိုင်ငံရေးအရ ဆွေးနွေးဖြေရှင်းဖို့ဆိုပြီးတော့ key point နှစ်ချက်ကို ထောက်ပြထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒီကြေညာ (၃) ခုစလုံးကို ချုပ်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင် အစိုးရအနေနဲ့ အဆင့်လိုက်သွားမယ့်လမ်းကြောင်းကို ဖော်ပြထားတာကို တွေ့ရတယ်။ တပ်မတော်ဘက်ကတော့ NCA လမ်းကြောင်းကို ဖော်ပြထားပြီး၊ EAO တွေဘက်က ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ လက်တွေ့ဖြေရှင်းရမယ့်လမ်းကြောင်း နှစ်ခုကို ထောက်ပြသွားတယ်လို့ပဲ မြင်ပါတယ်။
မေး ။ ။ NCA လမ်းကြောင်းနဲ့ပဲသွားသွား၊ ဘာနဲ့ပဲသွားသွားပေါ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့ လိုတယ်ဆိုတာတော့ သေချာပါတယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ရဖို့တို့ လိုလားတယ်ဆိုပြီးတော့ အားလုံးကလဲ ပြောနေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တချိန်တည်းမှာပဲ တိုက်ပွဲတွေ စစ်ရိပ်စစ်ငွေ့တွေကလဲ သန်နေတုန်းမှာ တိုက်ပွဲတွေရပ်ဖို့၊ ငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့ လတ်တလော အခင်းအကျင်းအရ ဘယ်လောက်များ မျှော်လင့်နိုင်မလဲ။ နိဂုံးချုပ်အနေနဲ့ သိချင်ပါတယ်။
ဖြေ ။ ။ ခက်နေတာက NCA ထိုးပြီတဲ့အဖွဲ့တွေမှာ အဓိက ပစ်ခတ်မှုတွေ ရှိနေတာက KNU, RCSS တို့ပေါ့။ လက်မှတ်ရေးထိုးတယ်၊ အပစ်ရပ်စဲထားပေမယ့် တပ်နေရာချထားရေးမှာ ကွဲလွဲနေတယ်။ အဲဒီမှာ KNU တပ်မဟာ (၅) တင်းမာမှုတွေ ရှိနေတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒါကတော်သေးတယ် လောလောဆယ်မှာတော့ တိုက်ခိုက်မှုတွေ မကြားရဘူး။ ဒါပေမဲ့ RCSS နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ဒီလပိုင်း အစောပိုင်း (၁၀) ရက်လောက် တိုက်ပွဲတွေ ဆက်တိုက်ဖြစ်နေတာတွေကို တွေ့ရတယ်။ ဒီရက်ပိုင်းမှာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အရင်လက်မှတ်ရေးထိုးထားပြီးနောက်ပိုင်း RCSS နဲ့ တိုက်ပွဲတွေဖြစ်တာ အများဆုံး။ သုံးရာကျော်လောက် ရှိပါတယ်။ အဲဒီတော့ ဒီပြဿနာကို ကျနော်တို့က JMC နဲ့ ဖြေရှင်းမှာလား။ ဘာနဲ့ဖြေရှင်းမလဲဆိုတာကို အာရုံစိုက်ပြီးတော့ လုပ်ဆောင်မှုပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အဲဒါပြီးရင်တော့ မြောက်ပိုင်း (၇)ဖွဲ့တွေနဲ့ KNPP လက်မှတ်မထိုးထားသေးတဲ့ အဖွဲ့တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ဖြေရှင်းဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဖြေရှင်းမယ်ဆိုရင်တော့ ဝ၊ မိုင်းလား၊ SSDP, မြောက်ပိုင်း (၇) ဖွဲ့ ဒီ (၃) ဖွဲ့က bilateral ထိုးထားပါတယ်။ KNPP မြောက်ပိုင်း (၇) ဖွဲ့ထဲမှာ မပါပေမယ့် bilateral ထိုးပြီးသားပါ။ အဲဒီတော့ ကျန်တဲ့ (၄) ဖွဲ့ bilateral ထိုးဖို့ ပြဿနာ ရှိနေတယ်။ ကျန်တဲ့ (၄) ဖွဲ့ bilateral ထိုးဖို့ထဲမှာ လောလောဆယ် ရခိုင်မှာက AA ကို အသိအမှတ်မပြုနိုင်ဘူး၊ ရခိုင်မှာ တည်ရှိခွင့်လည်း မပြုနိုင်ဘူး။ စောစောပိုင်း လိုင်ဇာမှာ တည်ရှိပိုင်ခွင့်လည်း အခုမပြုတော့ဘူးဆိုတဲ့အခါမှာ ဒီပြဿနာက လိပ်ခဲတင်းတင်း ဖြစ်နေတယ်။ ဆိုတော့ ဒီပြဿနာကို AA ပြဿနာ၊ ရခိုင်မှာ AA တည်ရှိနေတဲ့ ပြဿနာ။ AA ကို bilateral ထိုးဖို့ ပြဿနာက အဓိကပြဿနာ ဖြစ်နေပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ AA နဲ့ မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ ကိုးကန့်၊ KIA တို့ကလဲ ရွေးကောက်ပွဲ ပြီးတဲ့အထိပဲ အပစ်ရပ်ထားတာ ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ ရခိုင်မှာ စစ်ပွဲတွေ ပြင်းထန်လာရင် ရှမ်းမြောက်မှာကော ဖြစ်လာမလားဆိုတဲ့ အပိုင်းကို ကျနော်တို့က သတိထားဖို့ လိုပါတယ်။ တတိယအချက်အနေနဲ့ KIA က ၂၀၀၈ စစ်ပွဲတွေနောက်ပိုင်းမှာ ချီဗွေနဲ့ ထော့လော်ကြားထဲက စခန်းတွေကို နေရာယူထားတဲ့အတွက်ကြောင့် အဲဒီလမ်း ဖောက်လို့မရဘူး။ အဲဒီစခန်းတွေ ဖယ်ခိုင်းနေတဲ့ ပြဿနာကို မဖြေရှင်းနိုင်ရင် ကချင်မှာလဲ တိုက်ပွဲတွေ ပေါ်လာမှာ။ ဆိုလိုတာကတော့ ကျနော်တို့မှာ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ လက်တွေ့ကျကျ ဖြေရှင်းရမယ့် ပြဿနာတွေကို အာရုံစိုက် ဖြေရှင်းဖို့ လိုသေးတယ်လို့ပဲ ပြောချင်ပါတယ်။
မေး ။ ။ အခုလို အချိန်ပေးပြီး ဖြေကြားပေးခဲ့တဲ့ တိုင်းရင်းသားရေးရာကျွမ်းကျင်သူ ဦးမောင်မောင်စိုးနဲ့ သောတရှင်များကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
မွနျမာနိုငျငံရဲ့ ငွိမျးခမျြးရေးလုပျငနျးစဉျမှာ အရေးပါတဲ့ NCA တနိုငျငံလုံးအပဈအခတျရပျစဲရေး သဘောတူညီခကျြ လကျမှတျရေးထိုးခဲ့တာ အခုဆိုရငျ (၅) နှဈ ရှိသှားပါပွီ။ ဒီ (၅) နှဈတာ ဖွတျသနျးမှုအတှငျး အောငျမွငျမှုတှေ ဘယျလောကျတောငျ ရခဲ့သလဲ။ ရှအေ့နာဂတျမှာ ဘာတှမြှေျောလငျ့နိုငျမလဲ။ စိနျချေါမှုတှကေ ဘာတှရှေိနသေလဲဆိုတာကို တိုငျးရငျးသားရေးရာ ကြှမျးကငျြသူ ဦးမောငျမောငျစိုး ကို ကိုအောငျလှငျဦးက ဆကျသှယျမေးမွနျး ဆှေးနှေးထားပါတယျ
မေး ။ ။ မင်ျဂလာပါ။ NCA တနိုငျငံလုံး အပဈအခတျရပျစဲရေး သဘောတူညီခကျြက အခုဆိုရငျ (၅) နှဈ သကျတမျး ရှိသှားပါပွီ။ ၂၀၁၅ ခုနှဈတုနျးက ပထမဦးဆုံး သဘောတူညီခကျြရတဲ့အခြိနျမှာ တိုငျးရငျးသားလကျနကျကိုငျအဖှဲ့ (၈) ဖှဲ့ ရှိခဲ့ရက အခုဆိုရငျ နောကျထပျ (၂) ဖှဲ့တိုးပွီး (၁၀) ဖှဲ့ ရှိနပေါပွီ။ ဆိုတော့ သဘောတူညီခကျြရတဲ့ အခြိနျကစလို့ ဒီ (၅) နှဈတာ ကာလအတှငျး အဓိကအောငျမွငျမှုအနနေဲ့ ပွောပါဆိုရငျ ဘာတှမြေား ရှိမလဲ။
ဖွေ ။ ။ အဓိကတော့ ပွဿနာတှေ အမြားကွီးရှိတယျ။ ပွဿနာတှအေမြားကွီးအထဲက ပထမတဈခကျြပွောမယျဆိုရငျ NCA ထိုးပွီးပွီဆိုတဲ့အထဲမှာက ကနြျောတို့က သဘောတူညီခကျြ မရဘူး။ NCA ထိုးပွီးတဲ့အထဲက ပထမတဈခကျြပွောမယျဆိုရငျ တပျနရောခထြားရေးနဲ့ ပတျသကျပွီးတော့ သဘောတူညီခကျြ မရကွဘူး။ ဥပမာဆို RCSS တပျအငျအားတစုံတရာရှိတယျ။ လကျမှတျထိုးထားတယျ့ RCSS, KNU တို့နဲ့ ပတျသကျပွီးတော့ တပျနရောခထြားရေးမှာ သဘောတူညီခကျြ မရှိတော့ KNU ဖားပှနျဧရီယာ၊ KNU တပျမဟာ (၅) ဧရီယာမှာ တိုကျပှဲတှေ ဖွဈတယျ။ RCSS ဆိုလဲ အဲဒီလိုပဲ သူတို့ထိနျးခြုပျနယျမွတှေမှော တိုကျပှဲတှေ ဖွဈတယျ။ RCSS ဆိုရငျတော့ တိုကျပှဲတှေ အမြားဆုံး။ နှဈရာကြျော၊ သုံးရာလောကျ လကျမှတျထိုးပွီးမှ ဖွဈခဲ့တယျ။ ဒါကလဲ bilateral လကျမှတျထိုး၊ NCA လကျမှတျထိုးပွီးနောကျပိုငျးမှာ တပျနရောခထြားရေး သဘောတူညီခကျြမှာ နားလညျမှု အမြားကွီးကှဲပွားလာတယျ။ ကှဲပွားတဲ့အခြိနျမှာ ဒီပွဿနာကို ကနြျောတို့က မဖွရှေငျးနိုငျဘူး။ မဖွရှေငျးနိုငျတဲ့အခါမှာ ၂၀၁၈ နှဈကုနျဆိုရငျ KNU ကလဲ NCA သဘောတူညီခကျြပါ JMC တို့က ခတ်ေတရပျနားမယျဆိုတဲ့အထိ ဖွဈလာတယျ။ RCSS ကလဲ တပျရပျနားတယျဆိုတာ ဖွဈလာတယျ။ ဒါကွောငျ့မို့ NCA လုပျငနျးစဉျပွီး ၂၀၁၈ ကနေ ၂၀၁၉ တဈနှဈလုံး ရပျဆိုငျးသှားတယျလို့ ပွောလို့ရတယျ။
NCA လကျမှတျမထိုးထားတဲ့ အဖှဲ့တှနေဲ့ ပတျသကျပွီး ပွောရရငျ ရခိုငျမှာကတော့ တိုကျပှဲက ၂၀၂၀ အတှငျးမှာ ပွငျးပွငျးထနျထနျ ဖွဈတယျ။ ၂၀၁၉ တုနျးကလဲ ပွငျးပွငျးထနျထနျ ဖွဈတယျ။ လုံးဝဖွရှေငျးလို့ရမတဲ့ ပွဿနာ ဖွဈနတေယျ။ အဲဒါ ရခိုငျပွဿနာကလဲ သီးခွားပွဿနာတဈရပျအနနေဲ့ မဟုတျဘဲနဲ့ မွောကျပိုငျး နှဈဖှဲ့စလုံးရဲ့ ပွဿနာ ဖွဈနတောကို ကနြျောတို့ တှရေ့တယျ။ မွောကျပိုငျးအဖှဲ့ကလဲ စတုတ်ထအကွိမျ ဖိတျတဲ့အခြိနျမှာလဲ AA ကို ပေးမတကျတာကွောငျ့ မတကျတာ တှရေ့တယျ။ ဒါကွောငျ့မို့ ပွဿနာကတော့ ဖွရှေငျးစရာတှကေ မြားသေးတယျလို့ ပွောနိုငျပါတယျ.
မေး ။ ။ အခု NCA (၅) နှဈပွညျ့မှာပဲ နိုငျငံတျောအတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ၊ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီးမငျးအောငျလှိုငျစတဲ့ အဓိကခေါငျးဆောငျတှလေညျး မိနျ့ခှနျးတှပွေောတာကို တှရေ့ပါတယျ။ အစိုးရနဲ့ ထိပျတနျးခေါငျးဆောငျတှရေဲ့ မိနျ့ခှနျးတှထေဲမှာလဲ NCA (၅) နှဈတာကာလအတှငျး ကွုံရတဲ့ အခကျအခဲတှေ၊ စိနျချေါမှုတှကေို အသိအမှတျပွု၊ လကျခံပွောသှားတာတှကေို တှရေ့ပါတယျ။ ဥပမာ NCA သဘောတူညီခကျြထဲမှာ အရေးကွီးတဲ့ အမြိုးသားအဆငျ့၊ နိုငျငံရေးအဆငျ့ ဆှေးနှေးပှဲဆိုတာကို အဖွဈလောကျပဲ ထညျ့ထားတာတှကေ - မကောငျးဘူးဆိုတာမြိုး ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျမိနျ့ခှနျးထဲမှာ ထညျ့ပွောပါတယျ။ ဒီလိုကိစ်စတှကေ NCA လမျးကွောငျးမှာ ဘယျလောကျအထိ အဟနျ့အတား ဖွဈခဲ့တယျလို့ ယူဆပါလဲ။
ဖွေ ။ ။ စဉျးစားမှု ကှဲလှဲမှု ရှိနတောတှကေို ကနြေျာ့အမွငျပွောရရငျ အစိုးရနဲ့ တပျမတျော။ အဓိကတပျမတျောဘကျက လကျရှိဆှေးနှေးပှဲမှာ ငွိမျးခမျြးရေးဆှေးနှေးပှဲတှမှော တိုငျးရငျးသားလကျနကျကိုငျတှရေဲ့ ပွဿနာကို ဖွရှေငျးဖို့ ဇောငျးပေးပွီး စဉျးစားတယျလို့ ထငျပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ တိုငျးရငျးသားလကျနကျကိုငျဘကျက ပွောမယျဆိုရငျတော့ တိုငျးရငျးသားလကျနကျကိုငျတှဟော သူတို့ရဲ့ အမြိုးသားတနျးတူရေး ပွဿနာတှကေို ဇောငျးပေးပွီး စဉျးစားတယျ ထငျပါတယျ။ အဲဒီအခကျြ ဆှေးနှေးမှုနှဈခုက စဉျးစားမှုအခွခေံ မတူညီပါဘူး။ ဒါ့အပွငျ နိုငျငံရေးဆှေးနှေးမှုတှမှော မပွလေညျတာကတော့ တိုငျးရငျးသားလကျနကျကိုငျတှအေဖို့က ဘာကိုအခွခေံ စဉျးစားသလဲဆိုတော့ ယနပွေ့ညျထောငျစုသညျ ၁၉၄၇ ခုနှဈ ပငျလုံသဘောတူညီခကျြ အခွခေံပျေါမှာ ပျေါလာတဲ့ ပွညျထောငျစု ဖွဈတယျဆိုတဲ့ အခွခေံမူပျေါ ဖွဈတဲ့အတှကျဆိုတဲ့ နိုငျငံရေးသဘောထားတှကေို ဆှေးနှေးပါတယျ။ အစိုးရနဲ့ တပျမတျောဘကျကတော့ ဒီ ၄၇ ခုနှဈ သဘောတူညီခကျြကို အသိအမှတျပွုဖို့ ဝနျလေးပါတယျ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ ၄၇ သဘောတူညီခကျြမှာ ခှဲထုတျလိုက ခှဲထှကျနိုငျခှငျ့နဲ့ (၁၀) နှဈအတှငျး ခှဲထှကျခှငျ့ပေးမယျတို့ သဘောတူညီခကျြကို သူတို့ သဘောမတူပါဘူး။ သူတို့အနနေဲ့ကတော့ ဒီနအေ့ခွအေနနေဲ့ ကိုကျညီတဲ့ ပွညျထောငျစုတဈခု တညျဆောကျဖို့ဆိုတဲ့ဘကျက စဉျးစားပါတယျ။ ပထမအခကျြမှာ စဉျးစားမှုက အခွခေံလှဲပါတယျ။ ဒုတိယအခကျြအရ ပွောမယျဆိုရငျ တိုငျးရငျးသားလကျနကျကိုငျတှဘေကျက စဉျးစားတာက အမြိုးသားတနျးတူရေးနဲ့ ကိုယျပိုငျအုပျခြုပျခှငျ့ဆိုတဲ့ အမြိုးသားလက်ခဏာပျေါကနေ ဒီပွဿနာကို စဉျးစားပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ အစိုးရနဲ့ တပျမတျောဘကျက ဖယျဒရယျဒီမိုကရစေီလို့ ပွောပမေယျ့လဲ အစိုးရနဲ့ တပျမတျောဘကျ အခွခေံစဉျးစားတာက ဗဟိုခြုပျကိုငျမှု လြှော့ခပြွီးတော့ ပွညျနယျတှကေို တစတစ အာဏာတိုးပေးလိုကျတာမြိုးကို စဉျးစားပါတယျ။ အဲဒီတော့ ဒီအခွခေံ စဉျးစားမှု ကှဲလှဲနတောကို တဘကျက အပွနျအလှနျ သဘောပေါကျပွီးတော့ ဒီအခွခေံကိုက ပွလေညျနိုငျလိမျ့မယျ။
မေး ။ ။ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျမိနျ့ခှနျးထဲမှာ ပွောသှားတဲ့တဈခကျြကိုလဲ သတိထားမိပါတယျ။ တာဝနျရှိတဲ့ ခေါငျးဆောငျတှေ ကိုယျ့တာဝနျကို ပွတျပွတျသားသားလုပျဖို့၊ ပုဂ်ဂိုလျရေး၊ နိုငျငံရေး၊ ကိုယျကြိုးစီးပှားကွညျ့ပွီး အခြိနျဆှဲတာမြိုးတှေ မလုပျဖို့။ လုပျတယျဆိုရငျလဲ ဒါက ငွိမျးခမျြးရေးကို ဖကျြဆီးရာ ရောကျတယျလို့ သတိပေးသှားပါတယျ။ ဘယျသူဘယျဝါဆိုတာကို ပွောသှားတာတော့ မရှိပါဘူး။ ဆိုတော့ တိုးတကျမှုရအောငျ လုပျနိုငျရကျနဲ့ ဒီလို ကိုယျကြိုးကွညျ့ပွီးတော့ မလုပျဘူးလို့ ပွောနိုငျတဲ့ကိစ်စတှေ။ တကယျပဲ ရှိနလေို့ အခုလိုပွောသှားတာလား။ ဘယျလိုယူဆပါသလဲ
ဖွေ ။ ။ ကနြေျာ့အမွငျကတော့ ဒါမြိုးက ငွိမျးခမျြးရေးလုပျငနျးစဉျမှာ ဒီလိုပွဈတငျဝဖေနျမှုမြိုးက မလုပျသငျ့ဘူးလို့ ထငျပါတယျ။ ငွိမျးခမျြးရေးလုပျငနျးစဉျကို တကယျစတာက ၂၀၁၁ ခုနှဈမှာ သမ်မတဦးသိနျးစိနျမှာ ပွညျထောငျစုအစိုးရက ချေါတာပါ။ ငွိမျးခမျြးရေးလုပျငနျးစဉျကို တကယျတမျး ချေါဆိုနိုငျသူက အစိုးရပဲ ဖွဈပါတယျ။ အဲဒီတော့ -- အစိုးရဖွဈဖွဈ၊ NLD အစိုးရပဲဖွဈဖွဈ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ တိုငျးရငျးသားလကျနကျကိုငျအဖှဲ့အစညျးကနေ ငွိမျးခမျြးရေးလုပျငနျးစဉျ ဖျောလို့မရဘူး။ အစိုးရကပဲ ဖျောလို့ရမယျ။ ဒီနေ့ ငွိမျးခမျြးရေးလုပျငနျးစဉျကို ဦးဆောငျနတောသညျ အစိုးရ။ အဲဒီတော့ တကယျတမျးက ငွိမျးခမျြးရေးလုပျငနျးစဉျ အောငျမွငျဖို့အတှကျ သှကျသှကျလကျလကျ အားပေးဖို့လိုတယျ။ တှနျးတှနျးတိုကျတိုကျ လိုတယျဆိုရငျလဲ အဓိကတော့ အစိုးရက ဦးဆောငျပွီးတော့ လုပျဖို့လိုအပျမယျ ထငျပါတယျ။ ဒါကတော့ ကနြျောက ပွညျခိုငျဖွိုး၊ NLD တို့ကို ရညျညှနျးပွောတာ မဟုတျပါဘူး။ ငွိမျးခမျြးရေးလုပျငနျးစဉျတရပျရဲ့ အဓိကတာဝနျခံမှုက တညျဆဲအစိုးရ ဖွဈတယျဆိုတာကို ပွောခငျြတာပါ။
မေး ။ ။ (၅) နှဈပွညျ့ မိနျ့ခှနျးတှေ၊ ထုတျပွနျခကျြတှမှော ပွီးခဲ့တဲ့ကာလအတှငျး အောငျမွငျမှုတှေ၊ စိနျချေါမှုတှကေို သုံးသပျတာတှေ ရှိပါတယျ။ ဒီနရောမှာ ကှဲလှဲခကျြတှေ ရှိနတောကိုလဲ သတိထားမိပါတယျ။ ဆိုတော့ ငွိမျးခမျြးရေးလုပျငနျးစဉျမှာ တဘကျနဲ့တဘကျ ခဉျြးကပျပုံ အမွငျတှမှော အဓိက ဘာတှမြေားကှဲလှဲနလေို့ ရှမေ့တိုးနိုငျ ဖွဈနရေတယျလို့ ဦးမောငျမောငျစိုး နားလညျထားသလဲ။
ဖွေ ။ ။ အောကျတိုဘာလ (၁၅) ရကျ NCA (၅) နှဈပွညျ့မှာ Statements (၃) ခု ထှကျပါတယျ။ တဈခုက NLD အစိုးရက ထုတျတာပါ။ နောကျတဈခုက ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျက ထုတျတာပါ။ နောကျတဈခုကတော့ EAO တိုငျးရငျးသားလကျနကျကိုငျအဖှဲ့တှေ ထုတျတာပါ။ အစိုးရရဲ့ ထုတျပွနျခကျြမှာ အပိုငျး (၃) ပိုငျး အဓိကပါတယျ။ ပထမပိုငျးကတော့ ၂၀၂၀ နောကျပိုငျးမှာ NCA လကျမှတျမထိုးသေးတဲ့ တိုငျးရငျးသားလကျနကျကိုငျတှကေိုလဲပဲ နိုငျငံရေးဆှေးနှေးပှဲ စားပှဲရောကျအောငျ ကွိုးစားသှားမှာ ဖွဈသလို၊ NCA လကျမှတျထိုးထားတဲ့ အပဈအခတျရပျစဲရေးကို အခိုငျအမာ ဆကျလုပျသှားမယျ။ ဒုတိယပိုငျးမှာဆိုရငျတော့ -- အစညျးအဝေးပှဲမှာ ပွညျနယျအခွခေံတှနေဲ့ ပတျသကျပွီး ရေးဆှဲရေးကို အကောငျအထညျဖျော ဆောငျရှကျသှားမယျ။ တတိယမှာ ဒီအကောငျအထညျဖျောထားတဲ့ ဥပဒတှေကေို အခွခေံဥပဒေ ပွငျဆငျရေးမှာ ဆောငျရှကျသှားမယျဆိုပွီး အစိုးရကွညောခကျြမှာ တှပေ့ါတယျ။ တပျမတျောဘကျက ကွညောခကျြမှာတော့ အဲဒီလို အသေးစိတျတှေ မပါဘူး။ တပျမတျောကွညောခကျြမှာ ဇောငျးပေးသှားတာကတော့ NCA လမျးကွောငျးကနေ လြှောကျမယျဆိုတဲ့ဟာကို ဇောငျးပေးပွောသှားတာကို တှရေ့ပါတယျ။ ဒီမှာ ထူးခွားတာတဈခုကတော့ NCA ထိုးထားတဲ့ EAO ကွညောခကျြမှာ ထူးခွားတဲ့အခကျြတဈခကျြက ဘာလဲဆိုတော့ (၁) နိုငျငံရေးဆှေးနှေးပှဲ NCA နဲ့ ပတျသကျပွီး နိုငျငံရေးဆှေးနှေးလမျးကွောငျးပျေါမှာ အားလုံးပါဝငျနိုငျရေးကို သူတို့ကွိုးစားသှားမယျဆိုတဲ့အခကျြကို ဇောငျးပေးဖျောပွထားတာကို တှရေ့ပါတယျ။ ဒုတိယတဈခကျြအနနေဲ့ ပွောမယျဆိုရငျ ရခိုငျပွညျနယျပွဿနာကို နိုငျငံရေးအရ ဆှေးနှေးဖွရှေငျးဖို့ဆိုပွီးတော့ key point နှဈခကျြကို ထောကျပွထားတာ တှရေ့ပါတယျ။ ဒီကွညော (၃) ခုစလုံးကို ခြုပျပွီးပွောမယျဆိုရငျ အစိုးရအနနေဲ့ အဆငျ့လိုကျသှားမယျ့လမျးကွောငျးကို ဖျောပွထားတာကို တှရေ့တယျ။ တပျမတျောဘကျကတော့ NCA လမျးကွောငျးကို ဖျောပွထားပွီး၊ EAO တှဘေကျက ပွောမယျဆိုရငျတော့ လကျတှဖွေ့ရှေငျးရမယျ့လမျးကွောငျး နှဈခုကို ထောကျပွသှားတယျလို့ပဲ မွငျပါတယျ။
မေး ။ ။ NCA လမျးကွောငျးနဲ့ပဲသှားသှား၊ ဘာနဲ့ပဲသှားသှားပေါ့ မွနျမာနိုငျငံမှာ ငွိမျးခမျြးရေးရဖို့ လိုတယျဆိုတာတော့ သခြောပါတယျ။ ငွိမျးခမျြးရေး၊ အပဈအခတျရပျစဲရေး ရဖို့တို့ လိုလားတယျဆိုပွီးတော့ အားလုံးကလဲ ပွောနပေါတယျ။ ဒါပမေဲ့ တခြိနျတညျးမှာပဲ တိုကျပှဲတှေ စဈရိပျစဈငှတှေ့ကေလဲ သနျနတေုနျးမှာ တိုကျပှဲတှရေပျဖို့၊ ငွိမျးခမျြးရေးရဖို့ လတျတလော အခငျးအကငျြးအရ ဘယျလောကျမြား မြှျောလငျ့နိုငျမလဲ။ နိဂုံးခြုပျအနနေဲ့ သိခငျြပါတယျ။
ဖွေ ။ ။ ခကျနတောက NCA ထိုးပွီတဲ့အဖှဲ့တှမှော အဓိက ပဈခတျမှုတှေ ရှိနတောက KNU, RCSS တို့ပေါ့။ လကျမှတျရေးထိုးတယျ၊ အပဈရပျစဲထားပမေယျ့ တပျနရောခထြားရေးမှာ ကှဲလှဲနတေယျ။ အဲဒီမှာ KNU တပျမဟာ (၅) တငျးမာမှုတှေ ရှိနတေယျ။ ဒါပမေဲ့ ဒါကတျောသေးတယျ လောလောဆယျမှာတော့ တိုကျခိုကျမှုတှေ မကွားရဘူး။ ဒါပမေဲ့ RCSS နဲ့ ပတျသကျပွီးတော့ ဒီလပိုငျး အစောပိုငျး (၁၀) ရကျလောကျ တိုကျပှဲတှေ ဆကျတိုကျဖွဈနတောတှကေို တှရေ့တယျ။ ဒီရကျပိုငျးမှာတော့ မဟုတျပါဘူး။ အရငျလကျမှတျရေးထိုးထားပွီးနောကျပိုငျး RCSS နဲ့ တိုကျပှဲတှဖွေဈတာ အမြားဆုံး။ သုံးရာကြျောလောကျ ရှိပါတယျ။ အဲဒီတော့ ဒီပွဿနာကို ကနြျောတို့က JMC နဲ့ ဖွရှေငျးမှာလား။ ဘာနဲ့ဖွရှေငျးမလဲဆိုတာကို အာရုံစိုကျပွီးတော့ လုပျဆောငျမှုပေးဖို့ လိုအပျပါတယျ။ အဲဒါပွီးရငျတော့ မွောကျပိုငျး (၇)ဖှဲ့တှနေဲ့ KNPP လကျမှတျမထိုးထားသေးတဲ့ အဖှဲ့တှနေဲ့ ပတျသကျပွီးတော့ ဖွရှေငျးဖို့ လိုအပျပါတယျ။ ဖွရှေငျးမယျဆိုရငျတော့ ဝ၊ မိုငျးလား၊ SSDP, မွောကျပိုငျး (၇) ဖှဲ့ ဒီ (၃) ဖှဲ့က bilateral ထိုးထားပါတယျ။ KNPP မွောကျပိုငျး (၇) ဖှဲ့ထဲမှာ မပါပမေယျ့ bilateral ထိုးပွီးသားပါ။ အဲဒီတော့ ကနျြတဲ့ (၄) ဖှဲ့ bilateral ထိုးဖို့ ပွဿနာ ရှိနတေယျ။ ကနျြတဲ့ (၄) ဖှဲ့ bilateral ထိုးဖို့ထဲမှာ လောလောဆယျ ရခိုငျမှာက AA ကို အသိအမှတျမပွုနိုငျဘူး၊ ရခိုငျမှာ တညျရှိခှငျ့လညျး မပွုနိုငျဘူး။ စောစောပိုငျး လိုငျဇာမှာ တညျရှိပိုငျခှငျ့လညျး အခုမပွုတော့ဘူးဆိုတဲ့အခါမှာ ဒီပွဿနာက လိပျခဲတငျးတငျး ဖွဈနတေယျ။ ဆိုတော့ ဒီပွဿနာကို AA ပွဿနာ၊ ရခိုငျမှာ AA တညျရှိနတေဲ့ ပွဿနာ။ AA ကို bilateral ထိုးဖို့ ပွဿနာက အဓိကပွဿနာ ဖွဈနပေါတယျ။ အဲဒါနဲ့ AA နဲ့ မွောကျပိုငျးမဟာမိတျအဖှဲ့တှဖွေဈတဲ့ ကိုးကနျ့၊ KIA တို့ကလဲ ရှေးကောကျပှဲ ပွီးတဲ့အထိပဲ အပဈရပျထားတာ ဖွဈတဲ့အတှကျကွောငျ့မို့ ရခိုငျမှာ စဈပှဲတှေ ပွငျးထနျလာရငျ ရှမျးမွောကျမှာကော ဖွဈလာမလားဆိုတဲ့ အပိုငျးကို ကနြျောတို့က သတိထားဖို့ လိုပါတယျ။ တတိယအခကျြအနနေဲ့ KIA က ၂၀၀၈ စဈပှဲတှနေောကျပိုငျးမှာ ခြီဗှနေဲ့ ထော့လျောကွားထဲက စခနျးတှကေို နရောယူထားတဲ့အတှကျကွောငျ့ အဲဒီလမျး ဖောကျလို့မရဘူး။ အဲဒီစခနျးတှေ ဖယျခိုငျးနတေဲ့ ပွဿနာကို မဖွရှေငျးနိုငျရငျ ကခငျြမှာလဲ တိုကျပှဲတှေ ပျေါလာမှာ။ ဆိုလိုတာကတော့ ကနြျောတို့မှာ အပဈအခတျရပျစဲရေးနဲ့ ပတျသကျပွီးတော့ နိုငျငံရေးဆှေးနှေးပှဲနဲ့ ပတျသကျပွီး အပဈအခတျ ရပျစဲရေးနဲ့ ပတျသကျပွီးတော့ လကျတှကေ့ကြ ဖွရှေငျးရမယျ့ ပွဿနာတှကေို အာရုံစိုကျ ဖွရှေငျးဖို့ လိုသေးတယျလို့ပဲ ပွောခငျြပါတယျ။
မေး ။ ။ အခုလို အခြိနျပေးပွီး ဖွကွေားပေးခဲ့တဲ့ တိုငျးရငျးသားရေးရာကြှမျးကငျြသူ ဦးမောငျမောငျစိုးနဲ့ သောတရှငျမြားကို ကြေးဇူးတငျပါတယျ။